Komishanka Doorashooyinka Oo Ka Warbixiyay U Diyaar Garowga Kaadh Qaybinta Ee Sool iyo Sanaag Oo Bilaabmaysa 12-ka Bisha | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Komishanka Doorashooyinka Oo Ka Warbixiyay U Diyaar Garowga Kaadh Qaybinta Ee Sool iyo Sanaag Oo Bilaabmaysa 12-ka Bisha
Published on August 6, 2017 by sdwo · No Comments
Laascaanood (SDWO): Komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaaciyay in qaadashadda kaadhka codbixinta ee goboladda Sool iyo Sanaag in ay si rasmi ah uga bilaabmi doonto maalinta Sabtida ee 12-ka bishan August.
Waxaanay sheegeen komishanku in ay hadda gebagabeeyeen hawlaha tababarka shaqaalaha ee ka hawl-geli doona qaybinta kaadhka codbixiyaha, isla markaana ay ay si fiican ugu diyaar garoobeen.
Xubnaha sare ee komishanka doorashooyinka qaranka oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha komishanka C/qaadir Iimaan Warsame, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Laascaanood waxay sheegeen in 10-ka bishan la qaban doono xafladda daah-furka.
Iyadoo maalinta Sabtida oo bishu ku began tahay 12 in goboladda Sool iyo Sanaag ay si rasmiya uga bilaabmi doonto qaadashadda kaadhka codbixiyaha, kuwaasi oo noqon doona labadii gobo lee ugu danbeeyay.
Marwo kaltuun Sheekh Xasan Cabdi, oo ka tirsan xubnaha komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa warbaahinta uga warbixisay halka ay u marayaan hawlaha u diyaar garowga kaadh bixinta, waxaanay tidhi “Hawlaha loogu diyaar garoobayo qaadashadda Kaadhka codbixinta si fiican ayay noogu socdaan. Waxaanu ku jirnaa tababarkii shaqaalaha ka hawl-gelaya, waxaana noo soo xidhmay tababar la siinayay qayb ka mid ah ardayda ka shaqaynaya kaadh qaybinta iyo macalimiintoodii aanu hore u tababarnay”.
“Qaybta labaad-ba wuxuu tababarku u bilaabmi doonaa berito, laba maalmood ayaanu u socon doonaa. Guud ahaan tiradda shaqaalaha ka qayb geli doona gobolka Sool waa 400 iyo dheeraad, oo goobihiisu ay dhan yihiin 177 goobood.
177-ka goobood oo ah goobihii ay hore dadku isaga diiwaangeliyeen, si fiican ayaanu dadweynuhu isaga diiwaangeliyeen xiligii ay socotay diiwaangelintu. Imikana waxaanu ku dardaaraynaa bulshadda, maadaama oo ay markii hore-ba si fiican isku diiwaangeliyeen in ay imikana si wanaagsan u qaataan kaadhka codbixinta” ayay tidhi komishaner Kaltuun.
Geesta kale waxay sheegtay in dadweynaha gobolka Sool ay si wanaagsan ugu diyaar garoobeen in ay qaataan kaadhka codbixinta, waxaanay ugu baaqday bulshadda gobolkaasi in ay ka faa’iidaystaan mudadd ay socoto bixinta kaadhadhku.
Marwo Kaltuun, oo sharaxaad ka bixinaysay mudadda ay diiwaangelintu ka socon doonto goboladaasi, waxay tidhi “Bulshadu dhamaanteed sidaanu ka aragnay aad iyo aad ayay ugu diyaar garoobeen qaadashadda kaadhka codbixinta. Magaaladda Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool 7 maalmood ayay ka socon doontaa qaadashadda kaadhka codbixinta, wixii caasimadda ka baxsana waa 5 maalmood, maalmaha dheeraadka ahna magaalooyinka ayay 14 maalmood ayay ka socon doontaa”.
Ugu danbayn goboladda Sool iyo Sanaa goo la qorsheeyay in 12-ka bishan August ay ka bilaabanto kaadh-qaadashadda codbixiyaha ayaa noqonaya labadii gobo lee ugu danbeeyay, iyadoo afarta gobol ee kale hore looga soo qabtay.
Hawlahan qaadashadda kaadhka codbixinta ayaa looga gol-leeyahay in dadweynaha qaatay ay ku codeeyaan doorashadda madaxtooyadda oo la mudeeyay in 13-ka bisha November ee sanadkan 2017-ka ay Somaliland ka qabsoonto.